Abenzi nabahlinzeki be-Spectrum abagcwele | Ifektri Egcwele yaseChina
Imikhiqizo Ephelele Yokukhanya Okukhanyayo Okugcwele
Incazelo Yomkhiqizo Ideski Lokuvikelwa Kwamehlo Ithebula le-LED lehle isibalo samandla amafushane okukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ngokugcwalisa ukukhubazeka kwesibani se-blue-turquoise, okulungele ukunciphisa i-retina yamehlo kanye nokuqinisa ukugxila. Futhi ukusebenza kombala okuphezulu (Ra = 97 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) kwenza abantu bazizwe bekhululeke kakhudlwana futhi bathole okuningi empilweni. Izici ezibalulekile ● Ukuphepha kwamehlo ● Inkomba yokunikeza umbala ephezulu ● Ikhuthaza ukuqwashisa nokugxila kwinombolo yomkhiqizo R ...
Ukuthembeka okuphezulu okugcwele kwe-Ra98 Kaleidolite series
Incazelo Yomkhiqizo Uchungechunge lwe-Kaleidolite TM LED (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) lunobubanzi obufana nemithombo yokukhanya yemvelo njengelanga nokukhanya kwe-incandescent, okunezici eziphakeme zokuthembeka okuphezulu, umbala obanzi we-gamut nombala ophakeme ogcwele. Basiza ukufeza ukunikezwa kombala okunembile ngaphandle kokunikela ngokusebenza kahle kwe-lumen, ukuthembeka nezindleko. Izicelo ekukhanyeni kwezemfundo nezentengiso, isitolo esidayisa izinto ezidayiswayo, igalari, isibhedlela kanye nokukhanyisa kwasekhaya. Ukhiye ...
Ukukhanyisa okuphezulu kwe-TLCI
Incazelo Yomkhiqizo Uchungechunge lwe-studio yokukhanyisa i-studio (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ene-CRI ephezulu, ukuthembeka nombala wemibala okwandisa kakhulu ukubukeka kwezinto ngokuvumela imibala ukuthi ibonakale icacile futhi icacile ngokudubula kwekhamera Inkomba yokuguquguquka kokukhanya kwethelevishini ephezulu iqinisekisa ukusebenza kombala okuhle kuzikrini zokubonisa. Izici Eziyinhloko ● Inkomba ephezulu ye-CRI / Rf / Rg (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Inombolo yomkhiqizo we-TLCI ephezulu Inombolo yomkhiqizo Amandla kagesi Alinganiswe manje ...
Ikhwalithi ephezulu enikezela umbala kangcono
Incazelo yomkhiqizo Uchungechunge olunjengelanga nge-CRI ephezulu nokwethembeka okuphezulu kwalolu chungechunge kubuyisa umbala weqiniso womkhiqizo, futhi ukulimala kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphansi kuvikela kahle amehlo nokubona. Ngaphezu kwalokho, lolu chungechunge luqukethe nomkhanyo okhanyayo onsomi, odlala indima enhle kakhulu futhi ephumelelayo yezidingo zezitshalo nama-antibacterial. Izici Eziyinhloko ● Ukuthembeka kombala okuphezulu Rf ● Umbala ofanele we-gamut Rg ● Inani eliphansi lokukhanya okuyingozi okwesibhakabhaka Inombolo yomkhiqizo Amandla alinganisiwe [V] Okalwe manje [mA] CC ...